यस्तो बन्यो जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिन्सी र प्रिज्माको पहिलो म्युजिक भिडियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस्तो बन्यो जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिन्सी र प्रिज्माको पहिलो म्युजिक भिडियो
काठमाडौँ। टिकटकबाट भाइरल भएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिन्सी खतिवडा र प्रिज्मा खतिवडाको अभिनय रहेको पहिलो म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ।
'हाम्रो माया जिन्दाबाद' बोलको गीतमा स्वर शिशिर भण्डारी र बिन्दु परियारको रहेको छ। गीतमा सङ्गीत दीपक सिलवालको रहेको छ भने शब्द शिशिर भण्डारीले लेखेका हुन्। म्युजिक भिडियोमा अरु दुई जुम्ल्याहा दीपा श्रेष्ठ र दमन्ता श्रेष्ठ र शरद थापा र बसन्त थापा देखिएका छन्। हेर्नुस् भिडियो।